दाँतमा कि’रा लाग्यो ? नआ’त्तिनुहोस्, दाँतको किरा मा’ र्ने यी हुन् अचुक घरेलु उपाय – Jagaran Nepal
दाँतमा कि’रा लाग्यो ? नआ’त्तिनुहोस्, दाँतको किरा मा’ र्ने यी हुन् अचुक घरेलु उपाय
मुख हाम्रो शरीरको मुख्य ढोकाजस्तै हो। मुखलाई सफा र स्वच्छ राख्यो भने स्वास्थ्य पनि राम्रो हुन्छ। दाँत जीब्रो गिजालाई सफा र स्वस्थ राख्न आवश्यक छ। दाँतमा लाग्ने रो’ग दुई प्रकारका हुन्छन्। एउ’टा दाँतमा कि’रा लाग्ने हो भने अर्को गिजामा स’मस्या आउने हो। हामीले खाएको खा’नेकुरा दाँतको वरिपरि टासिन्छ, दाँत राम्रोसँग सफा गरिएन भने दिनदिनै खानेकुरा टासिँदै जान्छ।
दाँतमा जम्मा भएको खानेकुरा मुखमा भएका हजारौं कि’टा’णुका कारण एसि’ड बन्छ। त्यही एसि’डले दाँत बि’गार्न थाल्छ। त्यसैलाई बोलीचालीको भाषामा कि’रा लागेको भनिन्छ। दाँतमा कि’रा लाग्ने भनेको कि’रा नै निस्किने भन्ने होइन। मुखमा रहेको किटाणुले बनाउने एसि’डले दाँतलाई बिस्तारै बि’गार्दै लै’जाने भन्ने हो।
शरीरको बलियो अंगमध्ये दाँत पनि एक हो। तर यति बलियो दाँतलाई पनि किटा’णुले उत्पादन गरेको एसि’डले बिगार्दै लैजान्छ। दाँत तीन तहले बनेको हुन्छ । पहिलो तह दाँतको बा’हिरी भाग जो हेर्दा सेतो देखिन्छ, मेडिकल भाषामा यसलाई इनामेल भन्छौं । दोस्रो तह इनामेलभन्दा भित्रको तह, जस’लाई हामी ‘डेन्टिन’ भन्छौं । इनामेलको तुलनामा यो अलि कम’जोर हुन्छ । र, तेस्रो तह भनेको सबैभन्दा भित्री भाग हो, जस’लाई हामी ‘पल्प’ भन्छौँ ।
हामीले खाएका पदार्थहरू जब दाँत र गिजाको बीचमा, दाँतको चपाउने भागमा वा दाँतहरूबीचको कापमा दन्त लेउका रूपमा अड्’केर बस्छ । स्टेप्टोकोकस ब्याक्टे’रियाले तत्काल ए’सि ड उत्पादन गर्न थाल्छ । सो ए’ सिडले ‘इनामेल’ खिइन थाल्छ । खिएको ठाउँबाट जाने ब्याक्टे’रियाले भित्री भागमा संक्र’मण गर्दै जान्छ ।
विशेष गरी बाल’बालिकालाई गु लियो खानेकुरा दिँ’दा दाँतमा कि’ रा लाग्छ भन्ने भ्र’म छ । गुलियो मात्रै होइन, जुनसुकै खाद्यपदार्थले पनि दाँत बि’गार्छ, यदि त्यो दाँतमा रह्यो भने । तर, के पनि हो भने चकलेट र मिठाई खाँदा ती पदार्थहरू टाँसिने भएकाले छिटो खान मद्दत हुने हो ।बिहान–बेलुका खाना खाइसकेपछि फ्लोराइडयुक्त मन्जनले दाँत माझ्ने ।